नागरिक नागरिक अनियमित बन्दै आएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को ३७औँ मन्त्रीस्तरीय बैठक नेपालको पोखरामा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकको मूल काम यही वर्ष अर्थात् सन् २०१६ को नोभेम्बर १० र ११ मा सार्कको १९औँ बैठक पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गर्नु रह्यो। विस्तृतमा पढ्नुस्
कांग्रेसको नयाँ यात्रा
पूर्णबहादुर खड्का पूर्णबहादुर खड्का संघीय स्वरूपमा पार्टीको संरचनासंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहितको संविधान जारी भएपछि मुलुकको संरचना संघीय भएको छ। जिल्ला र अञ्चल संरचनामा रहेको पार्टी विधान र विधानअनुरूपको संगठन ढाँचालाई बलदेर संघीय संरचनामा लैजानु जरुरी छ। यो कुनै प्रदेश विशेषको प्रतिनिधित्वको मात्र… विस्तृतमा पढ्नुस्
विनोद कार्की विनोद कार्की प्रत्येक राजनीतिक–संवैधानिक संक्रमणले केही न केही अन्योल सृजना गर्छ। त्यस्तो अन्योल्ा कानुनको अस्पष्टता, कमी वा नयाँ सुरुवातको क्रममा देखापर्ने संक्रमणकालका कारण हुने गर्छ। पहिलो र दोस्रो प्रकृतिको अन्योल वास्तविक (रियल) अन्योल हो भने तेस्रोचाहिँ बोेधित (पर्सिभ्ड)अन्योल हो, जो सदासयका साथ… विस्तृतमा पढ्नुस्
विपुल पोख्रेल विपुल पोख्रेल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमार्फत् नवनिर्वाचित सभापतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै ७ जनालाई मनोनित गरेका छन्। यो महाधिवेशन ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ। विद्यार्थी संगठन नेविसंघको नेतृत्वबाट आएका नेताले पार्टीको जिम्मेवारी पाएका छन्। विस्तृतमा पढ्नुस्
लक्ष्मण वियोगी लक्ष्मण वियोगी भारतले १२ वर्षअघि अनुदानमा हुलाकी राजमार्ग बनाइदिने सपना बाँड्यो। तर, बनाउनु त परै जाओस् बीचमै अलपत्र छोडेर नेपालतिरै पन्छायो। अनावश्यक सर्त तेर्स्याएर पनि पन्छाएको काम गर्न दिएको छैन। भारतजस्ता दातानिर्भर पूर्वाधार आयोजना सर्त र स्वार्थको सिकार बनेको यो एउटामात्र नमूना… विस्तृतमा पढ्नुस्
डा. नम्रता पाण्डे डा. नम्रता पाण्डे देउवादाइ, तपाईंलाई नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनविरोधी समूहका नेता भने पनि १३औँ महाधिवेशनको परिणामले संस्थापन पक्षकै देखाएको छ। तपाईंले बचन दिनु भएको छ– कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्छु, पार्टीमा कसैलाई अन्याय हुन दिन्न, मूल्यांकन पद्धति स्थापित गर्छु। तर, कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्यमात्र होइन, तपाईंले… विस्तृतमा पढ्नुस्
किन हुँदैन विकास खर्च ?
18 Mar 2016 शुक्रबार ५ चैत्र, २०७२
सम्पादकीय सम्पादकीय आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विकास खर्च निकै दयनीय अवस्थामा रहेको छ। आव सुरु भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि यस्तो खर्च जम्माजम्मी १२.६५ प्रतिशतमात्रै हुन सकेको छ। सरकारले चालु आवमा विकासे कार्यक्रमका निम्ति २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा चैत २… विस्तृतमा पढ्नुस्
उफ्री भ्यागुतो, उफ्री!
डा.सरोज धिताल डा.सरोज धिताल प्रमुख पात्र भ्यागुतो भएका लोककथा र बालकथाहरू अनगिन्ती छन्। तर 'वैज्ञानिक प्रयोगमै आधारित' भनिएको र व्यापकरूपमा सुन्ने–सुनाइने गरेको एउटा कथा भने अत्यन्त त्रासदमात्रै होइन हामी सबैलाई तर्साउने र बिउँझाउने चरित्रको छ। धेरैलाई कन्ठस्थ होला यो कथा– म आज फेरि पनि… विस्तृतमा पढ्नुस्
दयालबहादुर शाही दयालबहादुर शाही शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति चुनिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनको एकता र भविष्यमाथि प्रश्न उठाउने बढेका छन्। राजनीतिक अस्थिरतामा लाभ देख्नेजतिले बन्दुक कांग्रेसको नवनिर्वाचित नेतृत्वको टिमको काँधमा थमाएका छन्। परिणाम भने समीकरण र धु्रवीकरणको खेलमा पारंगत देउवा र प्रयोगधर्मी राजनीतिमा कठोर साधक… विस्तृतमा पढ्नुस्
संघीयतामा अन्तरनिकाय समन्वय
डा. योगेन्द्रराज रिजाल डा. योगेन्द्रराज रिजाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ मा ३ (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहको शासन प्रणाली र धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत ३ तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएकोे छ। राज्यका विभिन्न अंग वा निकायको अधिकार, स्वतन्त्रता, जवाफदेही र क्षमताबारे उचित… विस्तृतमा पढ्नुस्
StartPrev…NextEndPage 32 of 506	भर्खरै...